NY FANAMPIANA ARA-DALÀNA WEBSITE
Ny ara-dalàna fanampiana ianao misy fanohanana avy ny tsara indrindra manam-pahaizana manokana tsara avy amin’ny fakan-kevitra, ny fanomanana ny tahirin-kevitra ary ny solontena tao amin’ny mazava ho azy fa ny resaka an-telefaona amin’ny solontenan’ny manam-pahefana sy ny hafa mitovy aminy andro rehetra ao anatin’ny herinandro, ary na oviana na oviana ny andro.
Pirenena ara-Dalàna ny asa Fanompoana ho an’ny isam-batan’olona sy ho an’ny fikambanana. Ny asa fanompoana no tena malalaka — tsy ny manodidina-ny-clock ara-dalàna fanampiana amin’ny famahana olana vonjy taitra (amin’ny alalan’ny finday, Skype na e-mail), fa ny fandrafetana naneho hevitra ny tahirin-kevitra, fifampidinihana fivoriana sy ny bebe kokoa.
Inona no fanampiana ara-dalàna
Zava-baovao ara-dalàna ny tolotra natao ho an’ny rehetra izay nividy karatra ara-dalàna ny fanampiana.
Karatra dia porofo fa manana ny tompony ny zo handray torohevitra sy fanohanana ara-dalàna ao ny endrika voalaza ao amin’ny sata
Arakaraka ny ara-dalàna ny asa mila — ny ambony ny antokom-pinoana card purchase mba foana ho afaka ny hahazo ny tsipiriany ny toro-hevitra ny mpisolovava, Mpitantana na marketer, ho ara-dalàna tanteraka ny tahirin-kevitra na ny redirect ny resaka amin’ny solontena iray avy amin’ny manam-pahefana ny lalàna.
Karatra mitaky samy hafa be ny asa.
Noho ny ny karazam-tariffs-Pirenena ara-Dalàna ny asa Fanompoana nilaza fa toy ny olona ara-dalàna sy ny olom-pirenena
Ho an’ny olona manan-danja ny fahafahana maimaim-poana ny antso sy ny finday fizaham-pahasalamana ho tompon’ny raharaham-barotra ny asa fanomanana ny antontan-taratasy sy ny vahaolana ara-potoana isan-karazany ny olana ihany no afaka ho niatrika ny mpandraharaha, ny orinasa lehibe manana ny fahaizany haingana double-check ny kajikajy ny orinasa mpisolovava sy notaterina ny sampan-draharaha ara-dalàna.
Nahoana no zava-mahasoa: — fanampiana ara-dalàna amin’ny aterineto na aiza na aiza eto amin’izao tontolo izao
Soa azo avy amin’ny fividianana karatra ara-dalàna ny fanampiana dia tsy afa-tsy ny mety ho manodidina ny famantaranandro fanohanana avy amin’ny manam-pahaizana amin’ny lafiny rehetra ny lalàna. Mpanjifa-Pirenena Ara-Dalàna Service:
Afa-tsy ny fotoana, satria izy tsy mila mivory miaraka amin’ny mpahay lalàna — ny fanohanana dia nanome lavitra amin’ny alalan’ny ny mora ho an’ny mpanjifa fifandraisana fantsona.
Afa-bola — ny fonosana tanteraka ny mpanjifa amin’ny saran-dalana ny vola lany be tsy noho ny mpisolovava.
Matoky ny fisian’ny fanampiana ara-dalàna ny mpahay lalàna miara-miasa manodidina ny famantaranandro, antso ho an’ny mpihazona ny karatra ara-dalàna ny fanampiana maimaim-poana.
Mahazo torohevitra sy ny valin’ireo fanontaniana na inona na inona sehatry ny lalàna.
Ankoatra ny ara-dalàna fanampiana ho an’ny cardholders ahitana ny isan’ny asa fanampiny.
Izany dia ahitana ny fanomezana endrika ny antontan-taratasy sy ny fenitra teny, ary miasa fanampiana ny ankizy ny mpanjifa, ary miantso ny asa vonjy taitra, ary ny famandrihan-toerana ny tolotra hotely sy ny fitaterana, ny Mivezivezy asa fanompoana, izay no zava-dehibe ho an’ny mpanao dia lavitra matetika
MITADY MPAHAY LALÀNA